Fifidianana loholona: namoaka ny didy 10 amin’ ny fampielezan-kevitra ny Ceni | NewsMada
Fifidianana loholona: namoaka ny didy 10 amin’ ny fampielezan-kevitra ny Ceni
Par Taratra sur 21/11/2020
Tsy mandeha ho azy amin’izao. Nampahafantarin’ny eo anivon’ny Ceni fa mitovy amin’ny fifidianana rehetra ihany ity fifidianana loholona ity. Anisan’izany ny tokony hanajana ireo lalàna mifehy izany.
“Voalohany, ny fanajana ny firaisam-pirenena sy ny toe-tsaina momba ny fihavanana malagasy. Eo koa ny tsy fiandanian’ny fitondram-panjakana sy ny tsy fitanilan’ny sampandraharaham-panjakana.”
Io ny nampahatsiahivin’ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Ra­ko­tondrazaka Fano, taorian’ ny fivoriana niarahana tamin’ ireo mpanara-maso fifidianana teny Alarobia, omaly, mo­mba ireo fepetra folo tokony hohajaina amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra amin’ izao fifidianana loholona hatao amin’ny 11 desambra izao.
Tsy fitanilan’ny RNM/TVM
Manaraka, ny tsy fitanilan’ ny sampandraharaham-panjakana momba ny haino aman-jery ary ny radio sy ny televiziom-panjakana. Eo koa ny tsy fiandanian’ny toeram-pi­va­vahana, izay tsy azo anaovana fampielezan-kevitra.
Mila tandrovina hatrany ny rariny sy ny fitovian’ny herijikan’ny kandidà rehetra; ny fangaraharan’ny loharanom-pa­ma­tsiam-bolan’ny fampielezan-kevitra sy ny fampiasam-bola natokana ho amin’izany, izay tsy maintsy hanendren’ ny kandidà izay mpitambolan’ ny fampielezan-kevitra.
Tsy fidirana amin’ny fiainana manokana
Mila hajaina ny fanajana ny fahamarinan-tena sy ny vo­ni­nahitra ary ny fahamendrehan’ny kandidà sy ny mpifidy; ny fahamarinan’ny fiainan’ny te­na manokana sy ny ny zavatra manokana momba ny kandidà. Tsy fidiran’ny mpanao fa­mpielezan-kevitra amin’ny fiainana manokana izany; ny tsy fihantsiana amin’ny fankahalana sy ny fanavakavahana; farany, ny fitandroana ny filaminam-bahoaka.